क्षयरोगको खास भय छैन, हामीलाई । किनभने अहिले क्षयरोगले हामीलाई उत्ति अत्याएको अवस्था छैन । यसको निदानका लागि सरकारी तहबाटै विशेष पहल जारी छ । उपचारदेखि औषधीसम्म निशुल्क उपलब्ध भइरहेको छ । तर, पछिल्लो तथ्यांकले क्षयरोगको भयबाट हामी अझै मुक्त नभइसकेको देखाउँछ । तथ्यांक भन्छ, हजारौं नेपाली क्षयरोगकै कारण मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन् । अझ
जाडोमा सुत्केरी र नवजात शिशुलाई अलि कठिन नै हुन्छ । किनभने जाडोमा सन्तुलित तापमान दिएर शिशु हुर्काउन त्यती सजिलो छैन । यतिबेला राम्ररी ख्याल राखिएन भने निमोनिया जस्ता समस्याले समात्न सक्छ । त्यसो त शिशु अवस्थाको बच्चाको शरीर अति संवेदनशिल हुने भएकाले उनीहरुको स्वास्थ्य-स्थितीबारे निकै हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । जन्मेदेखि २८ दिनसम्मको बच्चालाई नवजात शिशु
कुनै खानेकुरा तारेर, भुटेर बाँकी रहेको तेल के गर्ने ? अक्सर हाम्रो मनले भन्छ, ‘होइन, किन फ्याक्ने । अर्को पटक फेरी काम लाग्छ ।’ हामी कुनै खानेकुरा तारेर बाँकी रहेको तेललाई जतनसाथ राख्छौं । अब सोही तेल अर्को खानेकुरा पकाउन उपयुक्त हुन्छ ? कुरा स्वादको होइन । स्वास्थ्यको हो । के भनिन्छ भने, पटक पटक
तिमी जहाँ छौ, यात्रा त्यहीबाट सुरु गर्नुपर्छ । तिमी एक स्थानमा रहेर, अर्को स्थानको कल्पना नगर । ति सबै झुट हुनेछ । यसमा दुःखी हुनुपर्ने कारण पनि छैन । किनभने जो, जहाँ छ, यात्रा त्यहीबाट सुरु हुनसक्छ । यसमा चिन्तित हुनुपर्दैन । अरुले मलाई उछिन्यो, अरुभन्दा म पछाडि परें ! अर्कासँग तुलना पनि नगर ।
१४ मंसिर, पोखरा । अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरम पोखराको पर्यटकीय केन्द्र लेकसाइडमा यस वर्ष पनि सडक महोतसव हुने भएको छ । पोखराको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले रेष्टुरेण्ट एण्ड बार एशोसिएशन (रेवान) पोखराको आयोजनामा आगामी पुष १३ गतेदेखि १७ गतेसम्म अंग्रेजी नयाँ वर्षको स्वागतार्थ २० औं संस्करणको सडक महोत्सव हुने भएको हो । महोत्सवको तयारी
१४ मंसिर, काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट प्रदान गर्ने ‘युवा पत्रकारिता पुरस्कार–२०७५’ बाट अनलाइनखबरकर्मी विश्वास खड्काथोकी शुक्रबार सम्मानित भएका छन् । युवा र सामाजिक विषयमा कलम चलाएकोमा उनलाई अनलाइन सञ्चारमाध्यमको तर्फबाट पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । मन्त्रालयले छापा, टेलिभिजन, रेडियोतर्फका पत्रकारहरुलाई पनि पुरस्कृत गरेको छ । टेलिभिजनबाट जनता टेलिभिजनका रामकुमार रिजाल, छापाबाट गोरखापत्रकाकी सविता
शैक्षक भ्रमणमा आएको बसको ठक्करबाट गोरखामा एक बालकको मृत्यु
१४ मंसिर, गोरखा । पोखराबाट शैक्षिक भ्रमणका लागि गोरखा आएको रिजर्ब बसको ठक्करबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ । गोरखा नगरपालिका-१२ शिखरडाँडामा शुक्रवार ग१ख ६३९५ नम्बरको बसले ठक्कर दिदा सोही स्थानका ९ वर्षीय प्रिन्स थापाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गोरखाले जनाएको छ । सन्त जोसेफ बिद्यालयबाट घर र्फकने क्रममा विद्यालयको बसबाट ओर्लेर
१४ मंसिर, मोरङ । जनता नमुना स्कुल विराटनगरको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा शिक्षक प्रतिनिधिले अभिभावकलाई हातपात गरेकी छन् । व्यवस्थापन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा शिक्षक प्रतिनिधिले अभिभावक प्रतिनिधिमाथि हातपात गरेकी हुन् । स्कुलमा गत असार ३२ गते विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भए पनि बैठक बस्न सकेको थिएन । शुक्रबार बिहान ८ बजेदेखि बसेको बैठकमा रिक्त
१४ मंसिर, काठमाडौं । नुवाकोटको ककनीमा भेला गरेका कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर विधानबारे सुझाव बुझाएका छन् । तर, देउवाले धन्यवाद दिनुको साटो असन्तुष्टि जनाएको गुनासो सभापतिहरुले गरेका छन् । २५/३० जना जिल्ला सभापति शुक्रबार देउवालाई भेट्न पार्टी कार्यालय सानेपा पुगेका थिए । उनीहरुको तर्फबाट काभ्रे सभापति मधु आचार्यले भेलाको निश्कर्ष लिखित
‘निर्मलालाई न्याय देऊ’ लेखिएको पोस्टर प्रहरीले च्यात्यो
१४ मंसिर, काठमाडौं । निर्मला पन्तका लागि न्याय माग गर्दै काठमाडौका विभिन्न ठाउँमा टाँसिएको पोस्टर प्रहरीले च्यातेको छ । ‘निर्मलालाई न्याय देऊ’ लेखिएको उक्त पोस्टर टासिएका काठमाडौंको सार्वजनिक ठाउँमा गई प्रहरीले च्यातेको हो । पोस्टर टाँसेको आरोपमा प्रहरीले १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको चार महिना पूरा भए पनि